Ngwa KDE 19.04 na-enweta mmelite mmezi mbụ ya. Site na Linux
Ihe oru KDE taa kwuputara na e nwere mbụ nke mmelite mmezi atọ maka KDE Ngwa 19.04 wepụtara na nso nso a, ime ụlọ ọrụ emeghe maka usoro Linux.
.Bata izu atọ mgbe isi pụta, KDE Ngwa 19.04.1 nwere ọtụtụ ndozi na mmelite ntụgharị maka ngwa dị iche iche, gụnyere Igbe, Cantor, Dolphin, Kdenlive, Kontact, Spectacle, na Umbrello.
Enwere ihe karịrị mgbanwe 125 na ntinye KDE Ngwa 19.04.1, yana ndozi maka ịdepụta mkpado na desktọọpụ ka faịlụ anaghị ejedebe na aha etinyere aha ya, ndọtị nke ederede KMail anaghịzi agbazi, ma enwere ọtụtụ regressions na Kdenlive video nchịkọta akụkọ.
Enwere ike ịgbakwunye ebe nchekwa Ark na njikwa Dolphin ugbu a dị ka ọkacha mmasị na gburugburu ebe eserese nke GNOME, ihe ngosi nseta onyonyo ugbu a na-etinye ọkwa mkpakọ ruo 50 maka faịlụ PNG, na onye na-ekiri ihe oyiyi Okular na-akwado Qt 5.10 ma ọ bụ elu na poppler 0.58 ma ọ bụ karịa.
Ngwa KDE 19.04.2 na-abịa na June 6
Usoro mmepe nke KDE Ngwa 19.04 ga-aga n'ihu yana mmelite mmezi nke abụọ, KDE Ngwa 19.04.2, ga-abata na June 6. Mgbe nke ahụ gasịrị, anyị ga-enwe mmelite nke atọ na nke ikpeazụ a na-atụ anya na July 11.
Ka ọ dị ugbu a, ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ KDE Ngwa 19.04, anyị na-akwado ka ị wụnye mmelite ahụ ngwa ngwa o kwere mee, ma ọ bụ mgbe nchịkọta ahụ ruru ebe nchekwa siri ike nke nkesa kachasị amasị gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Ngwa KDE 19.04 na-enweta mmelite mmezi mbụ ya
DeepDetect na LiveDetect iji hazie iyi vidiyo vidiyo mpaghara na mmụta miri emi